Mahajanga: nandrobaka ny amboara teo amin’ny taranja Basket-ball N1B ireo tanora AS Victoire | Région Boeny
Noraisin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar tamin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 15 may 2017 tao amin’ny Lapan’ny faritra eny amin’ny Bord de la mer, ireo tanora AS Victoire nandrobaka ny amboara tompon-daka nasionaly N1B teo amin’ny taranja Basket-ball izay natao tany Antsiranana.
Izany fandresena izany dia nampiakatra avo ny voninahitr’ ireo tanora AS Victoire sy ny voninahitry ny faritra Boeny hoy ny Lehiben’ny faritra Boeny.
4 taona no nitsanganan’ny club AS Victoire tao amin’ny Ekar Victoir Rasoamanarivo Tsararano ambony Mahajanga, voataiza ara-pinoana sy ara-batana ireo tanora, efa maro ny dingana nandalovana, ampy ny fanazaratena entina miatrika ny fifaninanana.
Tsy mahamenatra fa afaka mirehareha antsika ato amin’ny faritra Boeny raha mikasika izany taranja Basket-ball izany, ny hirarina mba hiakatra avo dia avo amin’ny toerana N1A misy an’izy ireo ary hatratra izay heritreretina na tompon-dakan’i Madagasikara izany na tompon-dakan’ny Afrika hoy ny Lehiben’ny faritra Boeny.
Notron’ny DAGT ny faritra Boeny, ny Filohan’ny ligy ny Basket-ball eto amin’ny faritra Boeny.
Dingana manaraka hatrehan’ny AS Victoire dia hiatrika ny N1A izay atao atsy ho atsy.